အွန်လိုင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အဖြူရောင်စက္ကူ - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ သတင်းဘလော့ အွန်လိုင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အဖြူရောင်စက္ကူ
adminaccount888 15th ဧပြီလ 2019 နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ရှည်လျားစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော အွန်လိုင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အပေါ်အဖြူစက္ကူ နောက်ဆုံးတော့ 8th ဧပြီလ 2019 အပေါ်ထင်ရှား၏။ သင်တစ်ဦးအမြန် (ish) ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ချင်လျှင်, စာနယ်ဇင်းလွှတ်ပေးရေးပြည်ထဲရေးရုံးမှဖြစ်ပါတယ်ထွက်ထား ဒီမှာ.
ဤနယ်ပယ်ကိုအမှန်တကယ်နားလည်သောတစ်စုံတစ် ဦး မှသင်တုန့်ပြန်လိုပါက blog ည့်သည်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကျွမ်းကျင်သူ John Carr က…
၎င်းကိုကလေးများ၊ မိဘများနှင့်အခြားအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကယူကေမှာအင်တာနက်အုပ်ချုပ်မှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ရဲ့အစကိုပြတဲ့ပထမဆုံးနှုန်းထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းပဲ။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီအားလုံးနီးပါးတွင်ခေတ်ပြိုင်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုရှိသည်ကိုလူတိုင်းသိသည်။ အဲဒီအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်။
ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီများသည် "နယ်ပယ်ထဲမှာ" သူတို့အားပေးသောများမှာ "အသုံးပြုသူများကိုဝေမျှသို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိအသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအွန်လိုင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ " ငါဟု၏အခြားသောလမ်းရဲ့ခန့်မှန်း "လူမှုမီဒီယာ"။ သို့သော်အလားအလာကသမားရိုးကျဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအဖြစ်ယူဆကုမ္ပဏီများသည်ထက်ကျယ်ပြန့်သွားနိုင်။
အဖြူရောင်စက္ကူ၏အဓိကအချက်မှာကုမ္ပဏီများသည်သုံးစွဲသူများ၏လုံခြုံရေးအတွက်ပိုမိုတာ ၀ န်ယူမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများ (သို့) လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်အတွက်ပြဌာန်းထားသောတာဝန်အသစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်ကြေငြာထားသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
အသစ်ပြဌာန်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးထူထောင်လိမ့်မည်။ ကျင့် ၀ တ်စည်းမျဉ်းများတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကုမ္ပဏီများမျှော်လင့်ထားသည့်အရာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဖော်ပြထားသောတာ ၀ န်ကိုကုဒ်တွင်မဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြည့်ဆည်းလိုလျှင်၎င်းတို့သည်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းဖြင့်သက်ရောက်မှုတူတူသို့မဟုတ် ပို၍ ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့မည်ပုံထိရောက်စွာပေးမည်ကိုထိန်းညှိသူအားရှင်းပြပြီးတရားမျှတရမည်။
လုပ်ငန်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ကလေးသူငယ်များနှင့်အခြားအားနည်းချက်ရှိသည့်သုံးစွဲသူများအပါအ ၀ င်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်လက်လှမ်းမီရမည်။ ၎င်းသည် GDPR လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီးယူကေ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ် (အိုင်စီအက်စ်) မကြာမီ (?) ထုတ်ဝေတော့မည့်အသက်အရွယ်နှင့်သင့်လျော်သောဒီဇိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေတွင်ပိုမိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, သစ်ကိုထိန်းညှိမယ့်ကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများပြဌာန်းလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုထိရောက်စွာအကဲဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်း၏အစီရင်ခံစာများအကြောင်းကြားရန်နှင့်ယင်း၏စည်းမျဉ်းအရေးယူလမ်းပြခြင်း, ထိန်းညှိကုမ္ပဏီများမှကနေနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများလိုအပ်မှပါဝါရပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်အချိုးကျချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းကုမ္ပဏီများသည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစေမည်ဖြစ်သောဥပဒေပြုအတွက်ပြဌာန်းပါလိမ့်မည် ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ပျက်ဆီးကိုင်တွယ်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်အချိုးကျအရေးယူရန်လိုအပ် (ငါ့အအလေးပေး) ။
"သစ်ကိုစည်းမျဉ်းမူဘောင် (တိုးပွားလာခြင်းဖြင့်) တစ်ဦးထက်ပိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ချဉ်းကပ်နည်း (ယူပါလိမ့်မယ်) ဝန်ဆောင်မှုများအွန်လိုင်းပျက်ဆီးစပ်လျဉ်းရှိသည်သောတာဝန်"
ငါသည်ဤ PhotoDNA နှင့် paedophilic နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအနိုင်ကျင့်ကဲ့သို့သောအခြားအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူ detect နိုင်သည့် algorithms များဖြန့်ကျက်၏ကြီးမြတ်သောအဆင့်အထိဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ထား။
အဆိုပါစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအချက်အလက်တွေနဲ့ပေးကုမ္ပဏီများမှလိုအပ်မှစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပါဝါရပါလိမ့်မယ်။ လင်းမြင်သာမှုသစ်ကိုစစ်အစိုးရက၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်သွားသည်။ လျှက်မှတက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုကုမ္ပဏီများလူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးပိတ်ဆို့ခံရဖို့က်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်မှအလားအလာပင်, သိသိသာသာဒဏ်ငွေကောက်ခံရန်စွမ်းရည်အပါအဝင်မူဝါဒများကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်ကူညီပံ့ပိုးရန် tools တွေကိုတစ်အကွာအဝေးရှိသည်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ မအောင်မြင်မှုများအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိရာဇဝတ်ခံထိုက်ပေ၏ Making ကဒ်များအပေါ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်နှင့်အတူ tinged အဖြူ
ဒါဟာ White Paper အစိမ်းရောင်နှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖူးတဲ့ဟုပြောသည်လျက်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအလွန်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များများစွာထွက်ပေါ်လာရန်ရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်မှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်မည်သူမည်ဝါ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များဖြစ်သည်။
သုံးလ၏တရားဝင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာလရှိပါသည်ပေမယ့်ဒီကိစ္စရပ်များဝေးကြောင်းကျော်လွန်ကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရိမ်လိမ့်မည်ဟုနည်းနည်းသံသယရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေပြုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဆိတ်ကွယ်ရာ Brexit, ထိုခဲအလျင်အမြန်နိုင်တစ်ခုခုပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ်အငြင်းပွားမှုများရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်းအဓိကနိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးသည် White Paper ရှိအဓိကအချက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာအများပြည်သူ၏ထင်မြင်ယူဆချက်သည်ဤကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များနောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ အစိုးရများနှင့်လွှတ်တော်များသည်ဤကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များနှင့်ဝေးဝေးနေသင့်သည်ဟုထင်မြင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Mark Zuckerberg ကတောင်ပြဌာန်းချက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ဖို့တောင်းဆိုနေချိန်မှာတောင်မှဒီလိုအစွန်းရောက်သမားတွေဟာကြီးမားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သံသယရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးချန့်စ Saloon များ၏တံခါးများဖွင့်ရိုက်နဲ့တံဆိပ်ခတ်ပြီ။
ဤ blog မူလကအပေါ် posted ခဲ့သည် ဧပြီလ 8, 2019 by ယောဟနျသ Carr က။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ယောဟနျသထံမှဧည့်ခံကြနဲ့အခြားဘလော့ဂ်များကြည့်ဖို့လိုပါလျှင်, ဒီမှာသူတို့ဖြစ်ကြသည်။